YouTube Shorts: Inopa Chero Chinhu Chakasiyana Kubva ku Instagram Reels uye TikTok? - GoViral
musha » YouTube Shorts: Inopa Chero Chinhu Chakasiyana Kubva ku Instagram Reels uye TikTok?
TikTok yakashandura iyo vhidhiyo yezvigadzirwa indasitiri kubva payakatangwa muna 2018. Iyo algorithm yeapps yakabvumidza vagadziri vezvinhu papuratifomu kukwikwidza mamirioni emaonero zvisinei nekutevera kwavo, kureva. Kubudirira kwaTikTok kwakakurudzira mamwe maviri enhau enhau, Instagram neYouTube, kuvhura maficha aive akafanana neTikTok.
Instagram yakatanga yavo Reels ficha muna 2020, nepo YouTube yakaparura Shorts muna 2021. Asi izvi zvinhu zvinopa chero chakasiyana neTikTok? Kana ivo vese vakafanana? Ndozvatichawana pamusoro peiyi posvo. Saka, verenga mberi!
Pamusoro, pane zvakawanda zvakafanana pakati pemapuratifomu matatu. Kutanga, vese vatatu vanobvumira vashandisi kutora mimhanzi yepashure yemavhidhiyo avo kubva pane yemumhanzi katarogu. Kutsvaga uye kuona zvemukati mukati memapuratifomu matatu zvakafanana zvakare. Ese matatu mapuratifomu anoshanda pama algorithms akafanana futi, zvinoreva kuti vashandisi vasina kwakakosha kutevedzera vanogona zvakare kuwana husiku husiku mukurumbira.
Nekudaro, kana iwe ukangotanga kukwenya pamusoro, iwe uchaona kuti pane misiyano yakati wandei pakati pemapuratifomu matatu zvakare. Tichatora zvakadzama kutarisa kwavari muchikamu chinotevera.
Kuti ikubatsire kuti unzwisise mutsauko uripo pakati peiyo Insta Reels, TikTok, uye YouTube Shorts, isu tichaenzanisa izvo zvitatu pane zvinotevera zvinhu:
Ngatitangei nehurefu hwevhidhiyo. Iyo yakanyanya kureba vhidhiyo kune ese mapuratifomu maminetsi makumi matanhatu. Nekudaro, paYouTube Shorts, iwe unozogumira kune gumi nemashanu mavhidhiyo kana iwe uchirekodha mavhidhiyo uchishandisa icho chinhu pachacho. Nekudaro, kana iwe uchida yakareba YouTube Shorts mavhidhiyo, iwe uchafanirwa kuisa mavhidhiyo pane kuarekodha ivo kuburikidza nechinhu icho. Nekudaro, maererano nekuchinjika, YouTube Shorts inopa zvinopfuura TikTok uye Instagram Reels. Nekudaro, TikTok yakazivisa nguva pfupi yadarika kuti ichawedzera yayo yepamusoro vhidhiyo kureba kubva 60 miniti kusvika 15 maminetsi.
Panyaya yezvakakosha mhedzisiro, Instagram Reels uye TikTok zvine zvakawanda zvekupa kune vashandisi. Ipo TikTok ichipa dzakasiyana green-screen sarudzo uye maAR maficha, Instagram Reels inobvumira vashandisi kuti vagadzire nekushandisa iyo hombe firita raibhurari. YouTube Shorts ine yakakosha mhedzisiro katarogu, asi kubva ikozvino, ishoma kwazvo. Kana ichifanirwa kusvika pane zvinopihwa zveTikTok uye Insta Reels, vanhu veYouTube vanofanirwa kuwedzera zvimwe zvingasarudzwa kukatalog.
Ose ma TikTok ne Instagram Reels ane tsigiro yekunamira, iyo inobvumidza vagadziri nemaki kuti vabatanidze vavariro yavo. Nekudaro, YouTube Shorts haina kupa chero chinotsigira chinamirwa, chinova chinhu chikuru chinodzora chemhando dzinoda kushandisa chimiro kuunganidza mhinduro kubva kune vateereri.
YouTube Shorts inodonha zvakare maererano neCommerce kugona, kureva kuti vashandisi havagone kutenga vachishandisa ficha. Kune rimwe divi, zvese TikTok uye Instagram Reels vane zvekutenga maficha. Panyaya yeCommerce kugona, Instagram Reels ndiye mutambi mukuru pakati pevatatu.
Vhidhiyo yekugovana sarudzo paTikTok neYouTube Shorts inogumira, sezvo pasina chaicho mameseji sarudzo. Nekudaro, Instagram Reels inobvumira vashandisi kugovana zvemukati zvavo neshamwari dzavo uye vateveri kuburikidza nekutumira mameseji.
Unofanira kushandisa YouTube Shorts?
Nekudaro, uchipiwa kuti YouTube Shorts ichiri kushayikwa zvinoverengeka maficha izvo zvese zviri zviviri TikTok uye Instagram Reels inofanirwa kupa, iwe unogona kunge uchinetseka kana kuishandisa iri zano rakanaka. Zvakanaka, mhinduro yakatendeseka kumubvunzo uyu ndeyekuti zvese zvinoenderana nemamiriro ako. Kana iwe uri kufunga nezvekutanga chiteshi nyowani chiteshi chakanangana chete nemavhidhiyo mapfupi, Instagram Reels uye TikTok ndiyo ingave iri nani sarudzo.
Nekudaro, kana iwe uchitova neYouTube chiteshi uye uri kutarisa sarudzo dzekubatsira kuti ikure, hapana chikonzero nei usingafanire kushandisa YouTube Shorts. Iwe unofanirwa zvakare kuyeuka kuti YouTube Shorts inosungirwa kugadzirisa munguva pfupi iri kutevera, sezvo ichiri chitsva kuwedzera kuchikuva.
Kunze kwekushandisa YouTube Shorts, isu tinokurudzirawo kupa GoViral kuenda. GoViral chishandiso chinobvumidza chiteshi kuwana yemahara YouTube kufarira, maonero, makomenti, uye vanyoreri.
YouTube Shorts: Inopa Chero Chinhu Chakasiyana Kubva ku Instagram Reels uye TikTok? neGoViral Chikwata Chekunyora, 20 September 2021
Iwe unogona kunge wakashandisa hashtag pasocial media mapuratifomu se Instagram, Facebook, uye Twitter. Aya mawebhusaiti anoshandisa ma hashtag kuisa zvikamu, uye vashandisi vanogona kushandisa ma hashtag kutsvaga zvirimo. Paunoshandisa…
Zvese Zvikonzero Nei Yako YouTube Yekufamba Chiteshi Isiri Kukura
Kana zvasvika pakufamba chiteshi paYouTube, pane zvingori zvakawandisa kuverenga. Nepo mamwe acho achikura zvakanyanya, mazhinji acho anoita kunge akamira, pakupedzisira achidzikira pasina kugadzira zvakawanda zve…